Kooxda Al-shabaab Oo Mdaafiic Ku Duqaysay Xarunta Baarlamaanka, Xildhibaano Iyo Suxufiyiin Ku Dhawaacmay Iyo Jawaabta AMISOM Oo Sababtay Dhimasho dadka Rayidka Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Kooxda Al-shabaab Oo Mdaafiic Ku Duqaysay Xarunta Baarlamaanka, Xildhibaano Iyo Suxufiyiin Ku Dhawaacmay Iyo Jawaabta AMISOM Oo Sababtay Dhimasho dadka Rayidka Ah
Muqdisho (ANN) Mudanayaal ka tirsan Baarlamanka Dowladda KMG Soomaliya ayaa dhaawacmay, kadib markii maanta madaafiic culus lagu garaacay Xarunta baarlamanka oo xiligaasi ay shirar muhiim ah ka socdeen. Sidoo kale waxay madaafiicdaasu sababeen inay ku dhaawacmaan suxufiyiin goobta ku sugnaa,
kuwaas oo joogay waqtigaa barxada hore ee dhismaha Baarlamaanka.
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya magaalada muqdisho Laba Xildhibaan ayaa ku dhaawacmay madaafiicda, waxaana mid ka mida Xildhibaanada magaciisa lagu sheegay Sheekh Cabdi, halka aan magaciisa la xaqiijin xildhibaanka kale
Waxa kale oo dhaawacyo soo gaadheen Weriyayaal xarunta Baarlamanka u tegay sidii ay war ugasoo tebin lahaayeen, iyadoo ay halkaa ka socdeen kulamo xaasaasi ah, maadaama uu jiro khilaaf wey khilaaf si weyn u hadheeyay madaxweynaha iyo Raysal wasaaraha dawlada Somalia. laakiin weriyayaasha ayaa la sheegayaa inuu soo gaadhay dhaawacyo fudud.
Kooxda Xarakada Al -Shabaab ayaa Caawa sheegatay masuuliyadda duqayntii cuslayd iyo madaafiicdii maanta lagu garaacay baarlamanka, sida ay Idaacadda Al- Shabaab ee fadhigeedu yahay Muqdisho baahisay, taas oo sheegtay in saraakiisha Shabaab ay weerarkaa gaysteen guulana ay ka gaadheen sida lagu sheegay warkaa.
Ciidamada AMISOM ayaa jawaab ka bixiyay Madaafiicda ay kooxda Al-shabaab ku weerareen guriga Baarlamanka oo ay ku shirayeen xildhibaanada DKMG, waxayna duqaynta jawaabta ciidamada AMISOM dhalisay in khasaare badani soo gaadho dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan. Waxayna wararku sheegayaan in 20 qof oo Rayid ahi ku dhinteen duqayntaa maanta inta la ogyahay, iyadoo ay dhinteen tiro lagu qiyaasay 45 qof ay ku dhaawacmeen. Kadib markii ay ciidanka AMISOM Madaafiic kusoo garaaceen suuqa Bakaaraha iyo Wadada 30-ka ee magaalada Muqdisho.
Dad goob jog ahaa waqtigaa ayaa u sheegay shebekada wararka ee araweelonews inay madaafiicda AMISOM ku garaaceen halkaa xili ay goobahaasi saxmad ahaayeen, taas oo keentay khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac oo soo gaadhay dadka shicabka ah.
Dhinaca kale Baarlamanka Dowladda Federaalka KMG Soomaliya ayaa maanta go’aamiyay mudada ay Codka kalsoonida u qaadayaan Xukuumadda uu hogaamiyo Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaake. kulan balaadhan oo ay kasoo xaadireen in ka badan sadex boqol oo xildhibaan ayay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku go’aamiyeen in maalinimada sabtida ah codka kalsoonida loo qaado xukuumadda.
Sida ay sheegayaan wararka aanu ka helay kulnkaa markii laysugu yimi hoolka Baarlamanka oo inta badan joogeen mudanayaasha taageersan Madaxweynaha ayaa la waayay shir gudoonkii, iyadoo aanay waqtigaa joogin gudoomiyaha koowaad ee Baarlamaanka iyo ku xigeenkiisu, balse in yar ka dib ayay mudanayaashu shir gudoon u doorteen Mudane C/laahi Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah xubnaha Baarlamanka.
Hase yeeshee geba gebadii kulanka oo ay xildhibaanadu cod aqlabiyad ah isku raaceen in xukuumadu kalsooni soo weydiisato Baarlamanka ayuu madasha soo gaadhay C/weli Muudeey gudoomiye K/xigeenka koowaad, kaas oo ku dhawaaqay in Mooshinku sidaa ku ansaxay.
Dhinaca kale waxa jira warar sheegaya inuu maanta magaalada muqdisho soo gaadhay shariif Xasan Sheekh Aadan Gudoomiyaha Baarlamanka oo in Mudda ah ku maqnaa dalka dibadiisa, waxaana suurta gal ah inuu qayb ka noqdo khilaafka u dhexeeya madaxweyne Shariif iyo raysalwasaaraha, kaas oo cirka ku shareeran, iyadoo dadka ku dhow dhow Shariif Xasan Sheekh Aadan ishaarayaan inuu dhinaca raysalwasaaraha la safan doono.
Si kastaba ha ahaatee muranka iyo khilaafka dawlada taagta daran ayaa maraya halkii ugu xumayd, iyadoo ay shacbiga magaalada muqdisho deris la noqdeen madaafiicda kooxaha iyo quwadaha shisheeye ee ku loolamaya halkaa oo galaafta kumanaan qof noloshooda. Haweenayda Kaaliyaha Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay, isla markaana ah ku xigeenka Komishanka Xuquuqal isaanka ee Qaramada Midoobay oo lagu magcaabo, Mme Kyung-wha kang oo booqasho ku tagtay Somalia maalmihii lasoo dhaafay ayaa si weyn u canbaaraysay madaafiicda dadka shicibka ah ay ku garaacaan ciidamada AMISOM iyo kuwa dawlada ku meel gaadhka ah, taas oo sheegtay inay warbixin rasmi ah kasoo saaray marka ay ku laabato Geneva.